कीर्तिपुरमा बाल साहित्य महोत्सवको दोस्रो संस्करण हुँदै । – Himalitimes
२०७५ फाल्गुन ९ २१:३० मा प्रकाशित
काठमाडौं । कीर्तिपुरको नयाँ बजारमा ‘कीर्तिपुर बाल साहित्य महोत्सव–२०७५’ को दोस्रो संस्करणको तयारी गरिएको छ । फागुन १८ गते सम्पन्न हुने बाल साहित्य महोत्सव कीर्तिपुर नगरपालिका, क्रिएटिभ एकेडेमी, कथालय, बाल कला संग्रालय र शिल्पी थिएटरको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको हो ।
राजधानीमा बिहिवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मूल आयोजक समितिका संयोजक खगेन्द्र गौतमले साहित्यक महोत्सवको मुख्य उद्देश्य पठन संस्कृतिको विकास गर्नु रहेको बताए । विशेषगरी बालबालिकामा पठन संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजन गर्न लागिएको उनले बताए । पठन संस्कृतिले बालबालिकाको आत्मानिर्भरता, तार्किक क्षमता, सिर्जनात्मक तथा शैक्षिक उन्नयनमा सहयोग पुग्नुका साथै समाज र मुलुकलाई सकारात्मक टेवा पुग्ने विश्वास लगिएको उनले बताए ।
बाल साहित्य महोत्सव नै किन ?
देशमा बर्षेनी साहित्य फेस्टिबल वा यस्तै नाममा धेरै कार्यक्रमहरू हुन्छन । तर यस्ता कार्यक्रमहरूमा विरलै बाल साहित्य वा बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू हुन्छन् । यस्ता कार्यक्रमहरू बालबालिकाहरूको पहुँचभन्दा धेरै पर हुन्छ । जबकी बालबालिकाहरू भनेका भोलीको भविष्य हुन । यदि हामीले उनीहरूलाई आजबाटै पढ्ने चिन्तन गर्ने बाटोमा हिड्न सिकायौ भने भोली निसन्देह उनिहरूबाट सिङ्गो देशले सकारात्मक उर्जा पाउनेछ । त्यसैले हामीले बालबालिकाहरूको बिचमा काम गर्ने निधो गर्यौ ।
एउटा विद्यालयको नाताले यो हाम्रो सामाजिक दायित्वको विषय पनि हो । अझ हाम्रो इच्छा त देशभरिका विद्यालयहरूले यस्ता महोत्सवहरू आयोजना गरून भन्ने हो । यो महोत्सव आयोजनाले विद्यालयलाई त्यस्तो कुनै आर्थिक फाइदा होला भन्ने किग्चित सोचेका होइनौ । विद्यालयको सोचमा कथालय, बाल कला संग्रालय र दोस्रोे संस्करणबाट शील्पी थिएटरले प्राण भर्ने काम ग¥यो त्यसबाट हामी अझ बढि उत्साहि बनेका छौ । गतवर्षको पहिलो अनुभवले हामीलार्य हौसलाई मात्रै दिएको छैन थप परिमार्जित पनि बनाएको छ ।
महोत्सवको आर्कषण के ? महोत्सवमा बालबलिका माझ सम्पादक, सेलिब्रिटी टक शो, सेलिब्रिटीसँग विद्यार्थी र रंगमञ्च विषयक छलफल, नाटक प्रर्दशन, नाटको कार्यशाला, सोलो थियटर, ‘लाइभ म्युजियम’ लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन हुने आयोजकले जनाएको छ । महोत्सवमा विशिष्ट अतिथिका रुपमा शताब्दी पुरुष सत्य मोहन जोशी सहभागी हुने भएका छन् ।
सेलिब्रिटी ‘टक शो’मा ‘मिस नेपाल २०१७’ चन्डकले बालबालिकासँग अन्तरक्रिया गर्ने छन् । बालबालिकाहरु माझ सम्पादकसँग विषयक छलफलमा नागरिक अनलाइनका सम्पादक राजाराम गौतम र सेलिब्रिटीसँग विद्यार्थी र रंगमञ्च विषयक छलफलमा निर शाह, दयाहाङ्ग राई लगायतका व्यक्तिहरु सहभागी हुने बताइएको छ ।